Amagumbi angama-16 aphuphayo e-Attic-iiNdawo eziCwangcisiweyo zoYilo - Iingcamango Zegumbi
Amagumbi angama-16 aphuphayo e-Attic-iiNdawo eziCwangcisiweyo zoYilo
Ii-Attics zingaphezulu kakhulu kweeyunithi zokugcina ezinothuli kunye neendawo ezinqabileyo zokukhasa. Ngapha koko, banokubanakho ukuba ngamagumbi athande kakhulu endlwini xa benikwa unyango olufanelekileyo lokuhombisa. Into malunga nezo ziphantsi, zithambekile iisilingi Cwangcisa nje ithoni yokubaleka, ukusinda ngasese. Qhubeka ufundela imibono ye-16 yegumbi elisezantsi ukuze uvule le nto incinci, kwindwendwe amagumbi okulala kumagumbi okuhlambela ongezelelweyo kunye nokubuyela umva kombhali.
Jonga igalari 16Iifoto UPaul Raeside 1Kaninzi 'Dlala ngeSikali kwiNook yokufunda
Iingcamango zoyilo ngumhlobo wakho osenyongweni xa kufikwa kumba wokuhombisa igumbi elinophahla olusezantsi. Khetha ifanitshala esezantsi kunye nemifanekiso ebunjiweyo ukuze wenze ukubonwa kweesilingi eziphezulu. Ukuba ufuna ukwenza indawo yakho ye-attic ibe yindawo ethe cwaka ukuze ungene kuyo, yiza ne-settee, lounger, okanye ibhentshi ephakanyisiweyo, itafile esecaleni, kunye nokukhanya kokufunda.
UBeatriz da Costa MbiniKaninzi 'Yenze Igumbi Leendwendwe
Igumbi lokulala elongezelelweyo liya kuhlala liluncedo, ngakumbi ukuba ubamba iindwendwe rhoqo. Iibhedi ezimbini ezingamawele zenza ukubukeka okuhle, kodwa ukuba igumbi lide ngokwaneleyo, zama ezintathu. Ukudweliswa ngokulandelelana, ukuphindaphinda kudala ubuhle obukhethekileyo. Ukuprintwa okuluhlaza kulo lonke eli sithuba kongeza ukuziva uphupha, nako.
Ukulunga kunye neengozi
UMFANEKISO: Nicole Franzen; Uyilo: uLeanne Ford Interiors 3Kaninzi 'Thatha iNzuzo yayo yonke iNook kunye neCranny
Ngaba oku akubonakali ngathi yindawo yokufihla indlu yomthi owawuhlala uphupha ukuba nayo njengomntwana? Le nook yokufunda eyakhelwe-ngaphakathi yindawo efanelekileyo yokujija ngencwadi elungileyo, kwaye akunakuthatha ndawo kwaphela. Isitayela ngokufaka imithwalo, imiqamelo kunye nengubo ukuyenza icace ngakumbi.
URobert Peterson 4Kaninzi 'Yenze ibe yi Studio
Ukuba i-attic ekhayeni lakho inkulu ngokwaneleyo, yiguqulele kwigumbi lokufundela eligcwele igumbi lokulala, ikhitshi kunye negumbi lokuhlambela. Oku kuyakwenza iindwendwe zakho ziziva zizimele kwaye zisekhaya. Kwaye ungayiguqula inzuzo ukuba uyayirenta njengendlu okanye kwi-Airbnb. Thatha amanqaku esitayile kumyili omncinci uBrian Patrick Flynn wekhitshi elincinci kodwa elinesibindi e-Iceland.
UFrank omangalisayo 5Kaninzi 'Yenza iCocoon
Kukho uluvo oluthile olubonakalayo kwii-attics ngenxa yemigca eyahlukileyo yoyilo. Indlela ukukhanya okugalela ngayo kweli gumbi bubuthixo nje-ngekhe sifune ukushiya le cocoon incinci. Ukuba uthatha isigqibo sokutshintsha eyakho ibe ligumbi lokulala, yamkele loo vibe ngelinen evulekileyo kunye nesibane sependant esikhanyayo.
UMFANEKISO: UMax Kim Bee; Uyilo: uLeanne Ford Interiors 6Kaninzi 'Yongeza Igumbi lokuhlambela elongezelelweyo
Xa unesithuba esongezelelekileyo awazi ukuba wenzeni, elinye igumbi lokuhlambela alikho mbono mbi. Ayisiyiyo kuphela indawo yokuhlambela eyonyusa ixabiso lekhaya lakho, kodwa uya kuba nendawo apho ungathumela khona iindwendwe okanye amalungu osapho aqhubeka nokufaka igumbi lokuhlambela eliphambili endlwini. Siyayithanda indlela eli gumbi elinebhafu ngaphakathi kwendawo yokuhlamba: ukugcina indawo kunye nezinto ezahlukeneyo.
UNick Johnson 7Kaninzi 'Yizise ngaphandle
Ukuba indawo yakho ye-attic ivulela phezulu kumgangatho wophahla kwaye indawo ivumela, kutheni ungafaki ijacuzzi? Emva koko beka indawo encinci ye-hangout ecaleni ukuze ufumane indawo yangaphandle ukuze ujonge kuyo. Ngaba akukho gumbi lejacuzzi? Zama ukuxhoma ihammock encinci endaweni yoko.
UFrank omangalisayo 8Kaninzi 'Fumana uCozy
Igumbi le-attic likhangeleka njengeyona ndawo yokugqibela yokulala. Ngomaleko weegushini ezingwevu kunye nokuphosa, ibali elinombala lilula kwaye liyathuthuzela. Silayida itafile esecaleni kwikona yendawo encinci yokugcina izinto kuyo.
UFrank omangalisayo 9Kaninzi 'Bamba isakhelo sebhedi
Gcina umatrasi emhlabeni ukwenza iisilingi zivakale zisezantsi kancinci. Tshintsha itafile ende esecaleni kwebhedi ngesitulo esifutshane nesincinci kwaye uncike ubugcisa bakho eludongeni ukusuka phantsi.
UNicole Franzen 10Kaninzi 'Vumela ukuba Ithethe
Ukuba igumbi lakho lokulala liphakanyisiwe, kunye nokuziva ngathi liphezulu, thatha amanqaku kweli gumbi. Ngayo yonke into eyenziweyo kule ndawo, iyagqabhuka ngobuntu-ubungqina bokuba into encinci iyakwenza ubuqhinga. Ukwenza ubugcisa obufanayo, bambelela kwizinto zokuhlengahlengisa, ezinjengekhonkrithi kunye neenkuni. Sicinga ukuba uMarie Kondo angavuma.
Umhlaza kaRobson Shumi elinanyeKaninzi 'Yenze Igumbi loMdlalo
Ukuba i-attic yakho inkulu ngokwaneleyo kwaye unabantwana, yiguqulele kwigumbi lomdlalo / indawo ye-hangout. Igumbi elongezelelweyo kwigumbi eliphezulu liphezulu yindawo efanelekileyo, kuba iziva ngathi iyimfihlo endlwini iphela. Oko kuthetha ukuba akunamsebenzi ukuba ungqubano lokuhombisa namagumbi okukhula ngakumbi kulo lonke ikhaya.
UMFANEKISO: Nicole Franzen; Uyilo: uLeanne Ford Interiors 12Kaninzi 'Yisebenzise njengeCloset
Siyazi ukuba sathi i-attic inokusetyenziselwa okungaphezulu kokugcina nje, kodwa ayisiyombono imbi ukubeka ikhabhathi yakho apho ukuba ufuna indawo eyongezelelweyo okanye ubumfihlo. Ngepeyinti emhlophe emhlophe, isinxibo, kunye nesitulo, iya kuziva ngathi ligumbi elinxibayo.
Umhlaza kaRobson 13Kaninzi 'Faka umbala kunye nokuKhanya okuninzi
Ubeko kunye nemaleko emfusa pop ngokwenene kweli gumbi liphezulu ngokuchasene neempawu ezimnyama ezibukhali kunye nepeyinti emhlophe emhlophe. Yiphathe ngendlela obuya kwenza ngayo naliphi na elinye igumbi lokulala, hlala ukhumbula ukuba unokufuna ukufakela ukukhanya okungaphezulu ukuba kukho iifestile ezincinci zokukhanya kwesibhakabhaka.
UMFANEKISO: Nicole Franzen; Uyilo: uLeanne Ford Interiors 14Kaninzi 'Cwangcisa ukuRhoxisa koMbhali
Oku kukubuyela umlobi kwamaphupha ethu. Iofisi esephahleni iya kuba yindawo yokufihla efanelekileyo xa ufuna ukucinga nzulu. Ngendawo ebekiweyo, ezolileyo, peyinta yonke into emhlophe kwaye ubeke isikhululo sakho sokusebenza ngasefestileni.
UVictoria Pearson Shumi elinantlanuKaninzi 'Yiba Nesibindi
Eli gumbi lokulala liphezulu lifana nokuba ngaphakathi kwebhotile yegenie. Ukuba ufuna igumbi lokulala elongezelelweyo, sebenzisa i-attic: Siyabona ukuba eli ligumbi elifanelekileyo kulutsha.
UMFANEKISO: Tessa Neustadt 16Kaninzi 'Yenze Umsebenzi wasekhaya-Ulungele
Nika abantwana bakho indawo ethe cwaka neyabucala ukuba benze umsebenzi wesikolo ngokubeka indawo encinci yedesika kwigumbi eliphezulu. Isenokuba negumbi lobugcisa ukuba uyila kwaye ufuna indawo eyimfihlo ngakumbi yokucinga.
OkulandelayoAma-Pantries angama-20 angenakulungeleka afanelekileyo kwiNdlu yePhupha Isibhengezo-Qhubeka nokuFunda apha ngezantsiUHadley Mendelsohn Umhleli oMkhulu UHadley Mendelsohn ngumhleli ophakamileyo weNdlu, kwaye xa engaxakekanga ethathela ingqalelo kuzo zonke izinto ezinxulumene nokuhonjiswa, unokumfumana ethengisa iivenkile zokuvuna, efunda, okanye ekhubeka kuba mhlawumbi waphulukana neiglasi zakhe kwakhona.Lo mxholo wenziwe kwaye ugcinwe ngumntu wesithathu, kwaye ungeniswe kweli phepha ukunceda abasebenzisi ukubonelela ngeedilesi zabo ze-imeyile. Unokwazi ukufumana ulwazi oluthe kratya malunga noku kunye nomxholo ofanayo kwipiyano.io
Indawo yenkwenkwezi yeenkwenkwezi yeenkwenkwezi
amagumbi okugcina abantwana
izimvo zolungiselelo lwegumbi lokuhlala
iibhedi zebhedi ebhedini ikea
Iimpawu zekhabinethi yasekhitshini yango-2016